အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Mar 6, 2010
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၄)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, March 06, 2010 Saturday, March 06, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
တစ်ခါက တရားသူကြီးတစ်ယောက်ဟာ ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုကို သူ့အိမ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြုလုပ် ကျင်းပနေပါတယ်.. ရပ်ဝေးက လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ သူ့အိမ်မှာ ညအိပ် တည်းခိုကြပါတယ်.. ဧည့်ခံပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မှာ သူရဲ့ ညအိပ် ဧည့်သည် တစ်ယောက်က သူရဲ့ အဖိုးတန်နာရီအခိုးခံရကြောင်းနဲ့ ခိုးသူကို သူသိပါကြောင်း အိမ်ရှင် တရားသူကြီးက ထိုကိစ္စကို မျှတမှန်ကန်စွာနဲ့ သူ့နာရီ ပြန်လည် ရရှိအောင် ကူညီ ဖြေရှင်းပေးစေလိုကြောင်း လာရောက် တိုင်ကြားပါတယ်...
တရားသူကြီးကလည်း နာရီ ခိုးသူက ဘယ်သူလဲလို့ ပြန်မေးပြီး ခိုးသူကိုလဲသိရော “ ဟာ.. ဒီလူတော့ ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး... ကိစ္စမရှိဘူး... ခင်ဗျားနာရီ ပြန်ရအောင် ကျုပ် ဖြေရှင်းပေးမယ်. ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
ဧည့်ခံပွဲ မပြီးခင်မှာဘဲ တရားသူကြီးက နာရီပိုင်ရှင်ကို ခေါ်ပြီး နာရီကို ပိုင်ရှင်လက်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.... နာရီပိုင်ရှင်က ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း တရားသူကြီးကို ပြန်မေးပါတယ်.. “ တရားသူကြီးက ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းလိုက်တာလဲ ခင်ဗျာ ... ခိုးတဲ့သူကရော ဘာများ ပြောသေးသလဲ ခင်ဗျာ”
တရားသူကြီးက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်... “ရှူး တိတ်တိတ်နေ... ဒီနာရီ သူ့ဆီက ကျုပ် အသာလေး ပြန်ယူခဲ့တာ သူတောင် မသိဘူးဗျ....”
တစ်ခါက မြို့တစ်မြို့မှာ တက္ကစီဒရိုင်ဘာ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်.. ဒီနေ့ဟာ အဲဒီ ဒရိုင်ဘာနဲ့ တက္ကစီမောင်းခြင်း ပထမဦးဆုံးနေ့လဲဖြစ်ပါတယ်.. ကားထွက်လို့ မကြာခင်မှာ ခရီးသည် တစ်ဦးက ကားကိုတားပါတယ်.. ခရီးသည်ပြောတဲ့ နေရာကို လိုက်ပို့ဖို့ ကားကိုမောင်းထွက် လာပါတယ်.. ခရီးသည်က နောက်ခန်းကနေ ထိုင်ပြီး လိုက်လာတာပေါ့နော်.. ကားမောင်း လာပြီး ၁၀မိနစ်လောက်မှာ ခရီးသည်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုမေးချင်တာနဲ့ ကားဒရိုင်ဘာရဲ့ ပုခုံးကို လှမ်းပုတ်လိုက်ပါတယ်….
ပုခုံးပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာဟာ လန့်ဖြတ်ပြီး သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ဘစ်ကားတစ်စီးနဲ့ တိုက်မိလုနီးပါးဖြစ်ပြီးမှ ဘရိတ်ဆောင့်အုပ်လိုက်မိပါတယ်… ကားမောင်းသူဟာ ကားကို ချက်ခြင်း ပြန်မမောင်းနိုင်ဘဲ သူ့ကိုယ်သူတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားနေရတာကို ခရီးသည်က တွေ့မိပါတယ်.. တက္ကစီသမားဟာ ခရီးသည်ကို အပြစ်တင်ပါတယ်.. “ခင်ဗျား နောက်ကို ဒါမျိုးဘယ်တော့မှ မလုပ်နဲ့ .. အခုကြည့်စမ်း ကားတိုက်မှုကြီး ဖြစ်ခါနီးသွားတယ်.. နောက်တစ်နေ့ နေထွက်တာကို မမြင်ရအောင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျ…”
ခရီးသည်ဟာလည်း သူ့အမှားအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်.. ပြီးတော့ တက္ကစီသမားကို နားမလည်ခြင်းများစွာနဲ့ မေးပါတယ်… “ ကျုပ် ခင်ဗျားပုခုံးကိုပုတ်တာ ဖြေးဖြေးလေးပါဗျာ.. ဒီလောက် ထိရုံလေးနဲ့ ခင်ဗျားဒီလောက်တောင် ထိတ်လန့်သွားတာ ကျွန်တော်ဖြင့် နားကို မလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေမိတယ်ဗျ…” ခရီးသည်ရဲ့ စကားကို တက္ကစီသမားက တုံ့ပြန် ပါတယ်.. “ ခင်ဗျားအမှားကြောင့်လဲ မဟုတ်ပါဘူးလေ… ကျွန်တော်က ဒီကားကို ဒီနေ့မှ စမောင်းတာဗျ… ကျွန်တော် ၂၅ နှစ်လုံးလုံး အသုဘယာဉ်မောင်းလာခဲ့တာမို့ပါ ”လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့မိန်းခလေးတွေမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတတ်ကြတယ်.. အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီးရင် မှန်လေးပေါ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက္ကူတို့၊ လက်ကိုင်ပုဝါ၊ တစ်ရှူး ၊ သန့်စင်ခန်းတွေထဲက မှန် စသည်တို့မှာ ကိုယ်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးရဲ့ အရာကို ထင်နေအောင် လုပ်တတ်တဲ့အကျင့် ရှိကြတယ်.. မိန်းခလေး အားလုံးတော့ မဆိုလိုပါဘူးနော်.. တစ်ချို့တစ်ချို့တွေပါ…. အဲဒီအကျင့်လေးတွေ ပျောက်သွားအောင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက ဘယ်လို ဖြေရှင်းလိုက်တယ် ဆိုတာလေးကို အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေးကို ပြန်ပြောပြပါဦးမယ်…
တစ်ခါတုန်းကလေ မိန်းခလေးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်လုပ်တဲ့ ဦးရွှေမောင် ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက် ရှိတယ်ပေါ့နော်… အဲဒီကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ တစ်ချို့ ကျောင်းသူလေးတွေမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ်.. အဲဒါကတော့ ကျောင်းသန့်စင် ခန်းထဲကို ၀င်တိုင်း ကြည့်မှန်တွေပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာတွေကို ချန်ပစ်ခဲ့တဲ့ အကျင့်ပါဘဲ… ဦးရွှေမောင်ကြီးက ညနေရောက်တိုင်း ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ မှန်ပေါ်မှာ ထင်ကျန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရာလေးတွေကို အ၀တ်တစ်ခုနဲ့ နေ့စဉ် ပွတ်သုတ် သန့်စင်ပစ်ရပါတယ်.. ဘယ်လိုဘဲ သန့်စင်ပြီးပေမဲ့ ကျောင်းသူတွေက ထပ်လုပ်တော့ နောက်တစ်နေ့မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာတွေက ပြန်ရှိနေပြန်ပါရော… အခုလိုမလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုဘဲ သူက မေတ္တာရပ်ခံပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့ ရောက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းနီရာလေးတွေက ရှိနေမြဲ ပါဘဲတဲ့…
ဦးရွှေမောင်က ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးထံ အဲဒီပြဿနာကို တင်ပြလိုက်တော့ ကျောင်းဆရာမကြီးက အတန်းတိုင်းက ကျောင်းသူကိုယ်စားလှယ်တွေကို ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ သန့်စင်ခန်းထဲကို ခေါ်ဆောင်လာပါ တယ်.. ပြီးတော့ ဆရာမကြီးက ကျောင်းသူတွေကို စကားအနည်းငယ် ပြောပါတယ်.. “အခုလို လာရောက်ကြတဲ့အတွက် ကျောင်းသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အခုရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသူတွေအားလုံးလဲ ဒီမှန်ပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီရာတွေကို တွေ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်..” ဆရာမကြီးစကားကို ကြားတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေဟာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး မျက်စလေးပစ်ကြရင်း ကြိတ်ပြုံး လိုက်ကြတယ်ပေါ့… ဆရာမကြီးက စကားဆက်ပြောပါတယ်…
“ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းနီတွေဟာ အရောင်စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ပေါ်မှာ ထင်နေတဲ့ တစ်ချို့ နှုတ်ခမ်းနီတွေဟာ အလွန်ဘဲ ဖျက်ရခက်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဆရာမကြီးတို့ကလဲ ဖျက်ရခက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရာတွေကို ဖျက်ရလွယ်ကူဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရ တာပေါ့နော်.. အခု ဆရာမကြီးတို့ တွေ့ရှိထားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို လက်တွေ့ပြပါမယ်.. ဒီလက်တွေ့ပြတာကို တွေ့သွားတဲ့ ကျောင်းသူတွေအားလုံး ဒီနည်းလမ်းကို ကျန်တဲ့ ကျောင်းသူတွေကို ပြန်ပြောပြကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. နောင်ကိုလဲ ဒီမှန်တွေပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာကို ချန်ခဲ့မဲ့ အစား တစ်ရှူးလေးတွေကို သုံးကြမယ်လို့ ဆရာမကြီး ယုံကြည်ပါတယ်..”
ဆရာမကြီးစကားအဆုံးမှာ ဦးရွှေမောင်ကြီးက မှန်ကို တိုက်ချွတ်ဖို့အတွက် ရေမြုပ်ကို အိမ်သာ တစ်ခု ထဲက သွားယူလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ အိမ်သာကြွေခွက်ထဲကို ရေမြုပ်ကို နှစ်ထည့်လိုက်ပြီးနောက် မှန်ပေါ်မှာ ထင်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရာလေးများကို ဖျက်ပါတော့ တယ်… လက်တွေ့ပြပွဲပြီးလို့ ကျောင်းသူလေးများ သန့်စင်ခန်းထဲမှ အသီးသီး ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ဦးရွှေမောင်ကြီးက ပြုံးလိုက်ပါတယ်.. သူသိပါတယ်... နောက်နေ့တွေမှာ ဒီမှန်ပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာလေးတွေ တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး….
အလုပ်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေများနေလို့ပါ.. ရယ်စရာလေးတွေ များများရေးပါဦးဆိုတဲ့ စာဖတ်သူ ညီမလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စကားကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးချင်စရာလေးကို ဘာသာပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်...
Source - the-joke.com